I-Lenovo Z6 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwazisa ngokusesikweni | I-Androidsis
Kwezi veki zidlulileyo besineendaba ezininzi, ngohlobo lwamahemuhemu, malunga neLenovo Z6 Pro. Ifowuni entsha yohlobo lwesiTshayina yayinayo umboniso ucwangciselwe u-Epreli 23. Kancinci kancinci siye safunda izinto ezintsha ngomnxeba, njengamanqaku akho eAntutu. Okokugqibela, isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina ngoku sisemthethweni.
Ke ngoko, sele sizazi zonke iinkcukacha malunga nale Lenovo Z6 Pro. Umphezulu woluhlu, onamandla kunye neekhamera njengenye yamandla ayo, enkosi ngokudityaniswa kweelensi ezine, iqinisekisiwe kwezi veki zidlulileyo. Ifowuni ekufuneka ithathelwe ingqalelo kuluhlu oluphezulu.
ILenovo luphawu olwaziwa ngabantu abaninzi, nangona ingenguye othengisa kakhulu eYurophu. Ixesha elingaphezulu liphulukene nobukho bemakethi, nase China. Kodwa ngale fowuni babonisa ukuba banokubonisa into enomdla omkhulu ngaphakathi kwisiphelo esiphakamileyo kwi-Android. Yintoni esinokuyilindela kule fowuni?
1 Ukucaciswa kweLenovo Z6 Pro
Ukucaciswa kweLenovo Z6 Pro
Uyilo lwale Lenovo Z6 Pro lugcinwa ngokweendlela zentengiso. Ke ngoko, sifumana isikrini kunye nenotshi ngohlobo lwamanzi. Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen sefowuni, njengoko sibona okuninzi kuluhlu oluphezulu. Ukongeza, sineenzwa ezine ngasemva, zeekhamera. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwefowuni:
IsikriniI-OLED eyi-6,39-intshi ene-1080 x 2340 isisombululo sepikseli kunye ne-19.5: 9 ratio
Inkqubo: IQualcomm Snapdragon 855
i-ram6/8/12 GB LPDDR4
Ukugcina: I-128/256/512 GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512 GB nge-MicroSD)
Cámara trasera: 48 nge-f / 1.8 + 16 MP nge-f / 2.2 ephezulu kakhulu ye-angle + 8 MP nge-f / 2.4 telephoto + 2 MP ngokuvula f / 1.8 ividiyo kunye ne-TOF sensor
Ibhetri: 4.000 mAh ngentlawulo ekhawulezayo ye-27W
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 ene-ZUI 11 njengobume bokwenza ngokwezifiso
ConectividadI-Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, iBluetooth 5.0, NFC, i-USB-C, iDual GPS, iLDAC
abanye: Isenzwa somnwe weminwe esikrinini, Isandi seDolby Panoramic, i-minijack
UbukhuluUbukhulu: 157.5 x 74.6 x 8.65 mm.
I-Lenovo Z6 Pro iza nescreen esikhulu, ngokungathandabuzekiyo esinika amava okuntywila xa usebenzisa umxholo. Ukongeza, inkampani izibophelele kwiphaneli ye-OLED, ebonelela ngokusetyenziswa kwamandla okuncinci. Kwiprosesa, inamandla kakhulu kwintengiso, Ngenxa yoko uSpapdragon 855 onyuliweyo. Kukwaphawuleka ukuba ibhetri yomthamo we-4.000 mAh kwifowuni, ebonelela ngokuzimela okuhle.
Iikhamera yenye yezona zinto zibalulekileyo. Kuba le Lenovo Z6 Pro isebenzisa iikhamera ezine zangasemva. Indibaniselwano yezona zivamvo zinamandla, eziza kukuvumela ukuba uthathe iifoto kuzo zonke iintlobo zeemeko. Indibaniselwano ekhumbuza iHuawei P30 Pro.Ngoko kukho iinzwa ezintathu kunye ne-sensor yesine ye-TOF, esebenza njengenkxaso kwezinye iikhamera zefowuni.
Okwangoku, Le Lenovo Z6 Pro iye yaziswa ngokusemthethweni e-China. Inkampani ayikhange ithethe nto malunga nokwaziswa kwefowuni kumazwe aphesheya. Nangona ii-smartphones zorhwebo zihlala zisungulwa eYurophu. Ke kusenokwenzeka ukuba kungekudala siza kuba nolwazi olutsha malunga nokufika kwayo kwintengiso yaseYurophu. Kodwa kuya kufuneka silinde ithutyana.
Kwabo banomdla, iphehlelelwe ngemibala emibini eyahlukileyo: luhlaza okwesibhakabhaka nobomvu. Ngokumalunga neenguqulelo, sifumana iinguqulelo ezininzi zale Lenovo Z6 Pro, kuxhomekeke kwi-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Amaxabiso ale nguqulelo nganye e-China sele esemthethweni:
Imodeli ene-6/128 GB iya kubiza i-2.899 yuan (malunga ne-385 euro ukuyitshintsha)
Inguqulelo ene-8/128 GB iya kumaxabiso kwi-2.999 yuan (malunga ne-397 euros kutshintsho)
Inguqulelo ene-8/256 GB iza nexabiso le-3.799 yuan (malunga ne-503 euro ukuyitshintsha)
Imodeli ene-12/512 GB inexabiso kwi-4.999 yuan (malunga nama-660 eeuros zokutshintsha)
Siyathemba ukuva ngakumbi malunga nokukhululwa kwayo kungekudala. Ukwazi nokuba zonke iinguqulelo zale fowuni ziya kuphehlelelwa eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Lenovo Z6 Pro: Isiphelo esitsha sophawu